Khalin Gadan Cadaalad Maqori Kara[Qormo Xiisaleh] - Somali Cable
Shir lagu soo idleeyay magaalada Baydhabo [Sawirro]
Al Shabaab oo laga baqayo inay Kenya weeraraan
Liverpool oo go’aan cad ka qaadatay Mustaqbalka Mohamed Salax.
Donaruma oo ka tagaya kooxda reer Talyaani ee Milan.
Barcelona oo kordhisay xiisaheeda kubad sameeyaha Tottenham.
PSG oo lacag waali ah ku dooneysa xidig ka tirsan Real Madrid.
Real oo heshiis shaqsi ah la gaartay gool haye ay mudo raadinayeen.
Wasiirka Difaaca oo ku dhawaaqay in uu yahay Musharax Guddoomiyaha Baarlamaanka
Farmaajo oo u hambalyeeyay Sisi
Madaxweynaha JFS oo kormeeray Kuliyadda Jaalle Siyaad
Home/Business/Khalin Gadan Cadaalad Maqori Kara[Qormo Xiisaleh]
Khalin Gadan Cadaalad Maqori Kara[Qormo Xiisaleh]
Abdi Aziz Really March 16, 2018
Wariye Qarash laga Sugayo qabar sax ah makeenaa?
Ahmiyada Saxaafada waa mid balaaran waxaana marwaliba Saxaafada looga baahan yahay in ay ku Sifoowdo Cadaalad Sinaan Dhex Dhexaad nimo Run Sheegid iyo in aysan dhinac u Sacaba tumin.
Lakiin waxa ay balo ka jirtaa marka Saxafiga Xarunta uu ka howlgalayo laga sameeyo Xafiis warka lacag looga doonayo halkii laga furi lahaa xafiis xogta raadinteeda lacag ku bixiya.
Waxaa inta badan dhagaha Shacabka ku batay waxa loogu yeero Maarkeetin oo aan u naqiinay xafiis qabta Arimaha Suuq Genta sida iidhehyada ogegsiiska iyo waxii la mid ah balse hada lamarin hababiyay oo warbaahinta qaar xitaa wararkii lacag uga doonayaan.
Waxaa hada Dhacda in wariyaha lagu yiraah orod oo warka iyo lacagta kasoo qaad adna gaari raac kasoo qaado Masuul hebel taasi oo keentay in wariyuhu warkaas u sameeyo si aan cadaalad aheyn oo ka bad badis ah ileen lacag ayuu cunee lamana tafatiri karo ilee maamulkaa laaluush qaatee.
Soomaalidu waxa ay Tiraahdaa af wax Cunay Xishoo Waana tan hada haysata Warbaahinta Madaxa banaan Qaarkeed in aan maqalno war aqriye ama war qore leh Xaflad si heer sara ah loo soo agaasimay kuna soo gaba gaboowday jawi macaan waxaa keenay kumiyaadka yar ee uu la qaybsaday war baahintiisa.
Waxaa Maalin goob joog u ahaa wariye ka mid Suxufiyiin Dhoor ah oo booqday Xarun dad barakacayaal ah in uu yiri warkaan aniga waxaa laygaga rabaa lacag maamulkii ulama noqon karo oo horjoogihii kaamka ku yiri ii soo laabo dadka kaamka ayaan toban tobankun kaaga aruurinaa.
Qalinka Saxafiga waa wax kale lakiin hada waxaad moodaa in ay adeegsadaan inta Jeebka buuran waana cadaalad daro marwalibana Qalin Gadan Cadaalad Maqori karo.
Wariye Sharuur Qabaxloow inta Qalinkaagu gadan yahay Walee adna Horuumar masamaysid.
W/Q Wariye Cabdi Casiis Cabdullahi Maxamed Really
Abdi Aziz Really
Kenya oo Darbiga Beledxaawo dib u bilaabeysa
Dowladda oo u digtay Imaaraatka Carabta
Barnaamijka Falaqeynta Siyaasadda iyo mooshinka Jawaari
Wasiirka Caafimaadka oo booqatay qaar kamid ah bukaanada Qaraxii Soobe
Madaxweyne Farmaajo oo u safraya Sacuudiga